यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरे प्रतिवाद : कांग्रेस «
यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरे प्रतिवाद : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ । बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरे प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा सहभागी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथेमा आयोगको भावना र मर्म अनुसार नै ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । बैठकले माथेमा आयोगको भावना र मर्मविपरितको विधेयक ल्याए प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको शर्माले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै बिहीबारदेखि शुरु हुने पार्टीको विरोधसभालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ । संघीय संसद्सँगै सातै प्रदेशका प्रदेशसभामा पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जनाए ।
‘अहिलेको आन्दोलन सांकेतिकमात्रै’
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले अहिले गर्न लागेको आन्दोलन सांकेतिक मात्रै भएको बताएका छन् ।
चितवनमा बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले सरकारले अहिले गरेका क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस आन्दोलन उत्रेको स्पष्ट गरे । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अहिलेको सरकारले अविवेकपूर्ण ढंगले उल्टाएको, अनशनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको सवालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण प्रतिपक्षले आन्दोलन गर्नु परेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसको आन्दोलनपछि सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने पनि उनले बताए । जनताका जनजीविकाको पक्षमा कांग्रेस लागिरहने भन्दै नेता पौडेलले कांग्रेस अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए ।
नेता पौडेलले सरकारले गरेको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि पनि जनाए । राजदूत नियुक्तिका क्रममा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अहिलेको सरकार नचलेको उनको आरोप थियो । सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा सरकारको पक्ष लिने काम नहोस् र त्यसबाट आशावादी भएर पक्षपात नगरुन् भन्ने आशयले त्यस्तो धारा राखिएको उनले बताए ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा दाहाल
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पुरुषोत्तम दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । पार्टी उपसभापति एवं केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिले बिहिबार दाहाललाई नियुक्त गरेका हुन् ।
विगत चार दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय दाहाल मानवअधिकारका क्षेत्रमा समेत सक्रिय छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्यमा रमा कोइराला पौडेल (सुनसरी) लाई मनोनयन गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
कार्यशैली नसच्चिए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिने
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले सरकारले कार्यशैली नसच्याए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने
चेतावनी दिएका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पौडेलले भने, “प्रधामन्त्रीले
दुई तिहाईको दम्भ देखाउनुभयो । त्यसैले सरकारकै कारण हामी आज सडक र सदन दुवै ठाउँमा संघर्षमा
उत्रिन बाध्य भएका छौं ।” संविधानको ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री
ओली र संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादव मिल्नु आश्चर्यजनक भएको उनको भनाइ थियो ।
माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु, डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा गम्भीर
नदेखिएको, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अध्यादेश ल्याउने सहमति विपरीत तोडमोड
गरेको भन्दे उनले कार्यशैली सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
#यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक